Wadahadalka iyo dimoqraadiyadda ayaa gacanta ku haya: Dimoqraadiyadu maaha diidmada wada hadalka "Dimoqraadiyadu waa xoog badan tahay inta wadahadalku uu joogto yahay waddan"
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 20, 2018 00: 40 No Comments
Awoodda wadahadalka waa mid aan la adkeyn karin. Wadahadalku ma aha wax aan ahayn kuwa dimoqraadiyadda ah; maxaa yeelay, labadooduba isku tag.
Waxaa qoray, Franklin Delano Roosevelt, oo ah sarkaal reer Mareykan ah, soddon iyo labaatanaad Madaxweynaha Mareykanka, wuxuu ahaa Madaxweynaha kaliya ee Mareykanka loo doorto afar jeer.
Kuwa wax dhisa ee afrikaanka ah ee dhisa Rome: dhagax-dhiga weyn ee Nubia iyo Ethiopia, mason dhagaxa ka socda Masar iyo Liibiya, kuwa wax dhisa oo ka socda Anatolia, Crete, Qubrus, Malta iyo koonfurta oo ka yimid Giriigga, dhammaantood madow, dhammaan carruurta Afrika, waxay ahaayeen kuwa dhisi jiray magaalada Boqortooyada Roomaanka
Sep29 08: 28